Hamro Yatra | » सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या : आखिरी समयमा के भएको थियो ? सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या : आखिरी समयमा के भएको थियो ? – Hamro Yatra
> सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या : आखिरी समयमा के भएको थियो ?
सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या : आखिरी समयमा के भएको थियो ?
१ असार, काठमाडौँ । बलिवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेपछि अहिले बलिवुड र उनका विश्वभरीका फ्यान शोकमा रहेका छन् ।
टेलिभिजन हुदै बलिवुडमा उत्कृष्ट फिल्ममा काम गरिरहेका सुशान्तले ३४ बर्षको उमेरमा संसार छोडे । आइतबार अपराहन्न मुम्बईको बान्द्रास्थित घरमै मृत भेटिएका सुशान्तको अप्रत्याशित निधनले सबैलाई शोकमा पुर्याएको छ ।
अहिलेसम्म सुशान्तले किन आत्महत्या गरे भन्ने खुलेको छैन । उनको शव पोष्ट मार्टमका लागि अस्पताल पुर्याइएको छ भने प्रहरीले पोष्टमार्टपछि मात्र मृत्युको कारण भन्न सकिने बताएको छ । शुरुवाती अनुसन्धानबाट आत्महत्या नै भएको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ ।
भारतको बिहार पटनाबाट मुम्बई पुगेर बलिवुडमा सफलताको शिखरमा पुगेका सुशान्तको मुम्बईमा आफ्नै फ्ल्याट रहेको थियो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी आठ महिना अघि आफ्नो फ्ल्याट सानो भएपछि ठुलो फ्ल्याटमा भाडामा बस्न आएका थिए । यस फ्ल्याटमा उनी उनका क्रियटिभ म्यानेजर, उनका एक साथि र एक काम गर्ने सहयोगीसँग बस्ने गर्दथे ।
उनका सहयोगीले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार आइतबार बिहान सम्म सबै ठिक थियो । बिहान साढे ६ बजे उठेका सुशान्त ९ बजे तिर सहयोगीले दिएको जुस खाएका थिए । त्यसपछि उनले त्यति बेला आफ्नी बहिनिसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनले आफ्ना मिल्ने साथि तथा अभिनेता महेश शेट्टीसँग कुराकानी गरेका थिए । महेश र सुशान्तले सँगै अभिनयमा क्यारियर शुरुवात गरेका थिए उनीहरु दुवै अहिलेसम्म पनि निकै मिल्ने साथि थिए । उनीहरुले एकता कपुरको किस देशमे होगा मेरा दिल नामक सिरियलमा काम गरेका थिए । सुशान्तको अन्तिम फोन महेशलाई नै गरेको पाइएको छ ।
त्यसपछि सुशान्त आफ्नो कोठामा चुकल लगाएर भित्र बसेका थिए । करिब १० बजेको आसपासमा सहयोगीले खाना खान सोध्न ढोका ढकढकाउदा ढोका खुलेन । लगातार ढोका खेल्न आग्रह गर्दा ढोका नखुलेपछि सहयोगीले सुशान्तकी बहिनिलाई फोन गरेका थिए । बहिनि आएपछि ताला तोडेर ढोका खोलिएको थियो । ढोका खोल्दा जुन दृश्य कोठामा देखियो त्यो अकल्पनीय थियो ।
प्रहरीले सुशान्तको मृत्यु बिहान १० देखि १ बजेसम्म भएको हुनसक्ने बताएको छ । प्रहरीले २ बजे आफुहरुले खबर पाएको र साढे २ बजे प्रहरी सुशान्तको फ्ल्याटमा पुगेको बताएको छ । सुशान्तको कोठाबाट कुनै नोट पाइएको छैन । त्यसपछि सुशान्तको शव साँझ साढे ५ बजे डक्टर आरएन कपुर अस्पतालमा पोष्ट मार्टमका लागि लागिएको छ ।
मुम्बईका डिसीपी अभिषेक त्रिमुखेले सुशान्तको मृत्यु पासो लगाएर भएको बताउदै पोष्ट मार्ट रिपोर्टपछि नै विस्तृत रुपमा बताउन सकिने बताए । उनको कोठाबाट कुनै संकास्पद कुरा नभेटिएको बताइएको छ ।